Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Raphael Varane Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Mr dị ọcha'. Anyị Raphael Varane Storymụaka Akụkọ na Iwepụ akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Real Madrid na French Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Zidine Zidane Childhood Story Plus Na-agbaghasị Ihe Ndị Na-akpata Echiche
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya dị egwu mana mana ole na ole na-ele Raphael Varane's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere Raphael Varane - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Raphael Xavier Varane mụrụ na 25th ụbọchị nke Eprel 1993, na Lille, France. Ọ bụ onye nketa Martiniquais site n'aka nna ya, Gaston Varane, onye sitere na Le Morne-Rouge, ebe nne ya France, Annie Varane zụlitere na Saint-Amand-les-Eaux.
Mmalite ya na Martinique bụ obere agwaetiti nke gụnyere ngalaba France na Caribbean nke France. Thierry Henry na Abidal sitere na Island a.
Site na nwata, Varane sooro nna ya soro n'egwuregwu egwuregwu nke mpaghara ya. N'ụlọ, nna ya, Gaston alaghị azụ itinye bọọlụ n'etiti ụkwụ nwa ya.
Football bụ agụụ ya na, ọ bụghị naanị ihe ịga nke ọma, ọ chọrọ ka onye ọ hụrụ n'anya Raphael hụ n'anya ma ghọta egwuregwu ahụ otu o si mee.
Raphaël malitere ịgba egwu, mana ọ masịghị ya. Mgbe ahụ ọ gbanwere football. Ọ kwụsịghị ịgba bọl n'ụlọ. Ọ na-enye nna ya ekele maka mmata ya na football nke mere ka ọ banye maka ụlọ ịgba bọọlụ mbụ ya bụ AS Hellemmes mgbe ọ dị afọ asaa.
N'okwu nna ya… “M na-akụziri Raphael mgbe niile na ọ ghaghị ichedo bọl, na-achịkwa ya ma melite usoro ya.
Raphaël enweela ọzụzụ mgbe niile. Enweghị m ịmanye nwa m ịga ọzụzụ. Ọ hụrụ ịrụsi ọrụ ike. Isi okwu ya bụ itinye uche ya. ”
Mgbe ọ nọrọ afọ abụọ na klọb ahụ, na July 2002, ọ sonyeere RC Lens ọkachamara. ebe o tolitere na Gaël Kakuta nke bara nnukwu uru nke klọb bu onye tinye Chelsea FC na nsogbu.
Na 22 June 2011, Onye isi oche Lens Gervais Martel kwadoro otu ndị na-akwado ya na nzukọ ọgbakọ na Varane ga-esonye na Real Madrid na-ekwu na, “Ọ ga-egwu Real Madrid n'okpuru nduzi nke José Mourinho. " Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Camille Tytgat? Nwunye Raphael Varane:
Ọ naghị apụ apụ, ọ na-esiri ike ịga Santiago Bernabeu, mana mgbe ọ na-apụ, kamera niile na-elekwasị anya na ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị onye maara ọtụtụ ihe banyere ọmarịcha ntutu a lụrụ di na nwunye bụ Raphael Varane. Nke a bụ nwunye mara mma Raphael Varane, Camille Tytgat.
Akụkọ na-egosi na ha na-akpa kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Ha abụọ zutere n'oge ụbọchị ụlọ akwụkwọ sekọndrị na France na mgbe Varane nwere ohere ịbanye Real Madrid ọ laghị azụ iso ya. Na June 2015, ha abụọ lụrụ na France.
Raphael Varane na Camille Tytgat nwere mmasị na-enwe ọmarịcha mma na anwụ na-acha n'oge oge ọnụ. Ndi France na nwunye ha nwere obi uto.
Ndụ Raphael Varane:
Nke mbu, Obi iru ala bu ihe diri ezi na ulo Varane. Raphael ketara ya. Nke a bụ ihe gosipụtara onyinyo a na ala. Ọ na-abịa site na nzụlite ezinụlọ nke etiti tupu ego ịgba bọọlụ amalite ịkwụ ụgwọ. Ugbu a, anyị nyere gị ntakịrị ihe banyere ezinụlọ ya site na nne na nna ya.
Nne na nna: Nna Raphael Varane, Gaston Varane mụrụ ma zụọ ya na mgbago ugwu nke agwaetiti Martiniquais.
N'ihi ikike ịchọ ohere ndị ọzọ, Gaston kwagara na nwunye ya, Annie na nne nke Raphael Varane (nke dị n'okpuru), gaa obere obodo Hellemmes-Lille na 1976. Nke a bụ afọ iri na asaa tupu ọmụmụ Raphael. Zute nne na nna Raphael Varane.
NDỊ BỤ: Raphael Varane nwere ụmụnne nwoke abụọ aha ya bụ Anthony na Jonathan. Nwanne ya nwoke nke okenye, Anthony Varane nke na-esere n'okpuru ebe a lara ezumike nká n'ihi mmerụ ahụ. Zute Raphael Varane's Nwanna nwoke okenye- Anthony Varane.
Anthony bụ maka ikwe ka Varane meziwanye usoro ya. A hụrụ Anthony dịka otu n'ime ndị na-eme egwuregwu kachasị mma n'oge France n'oge egwu ya. Ụfọdụ ndị Fans na-eche na ọ ga-abụrịrị ihe dị mma karịa Raphael Varane.
N'okpuru ebe a bụ Raphael na nwanne ya nwoke bụ Jonathan Varane bụ ndị Lens họpụtara ka ha rụọrọ nwanne ya nwoke ọrụ. Lee Jonathan na Raphael.
Jonathan Varane na-ekwu na ya bụ onye na-eto eto na-eto eto nke na-egbu ya maka ịgba egwu ntorobịa ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ya na-eme mgbaru ọsọ.
Raphael Varane Ndụ Nke Onwe:
Raphael Varane nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Raphael Varane: Ọ bụ onye a pụrụ ịdabere na ya, nwee ndidi, dị irè, nke a na-etinye aka, onye na-arụ ọrụ na nke siri ike
Akwụsị Raphael Varane: O nwere ike ịbụ Stubborn, nwere ikike na enweghị nkwekọrịta.
Ihe Raphael Varane nwere mmasị: Ọ nwere ike ịchọta Ugbo, nri, egwu, romance, akwa akwa, na-arụ ọrụ aka
Ihe Raphael Varane anaghị achọ: O choro mgbanwe mgbanwe na mberede, nsogbu, nchebe nke ụdị ọ bụla na akwa akwa.
Na nchịkọta, Raphael dị irè na nke ọma. Ọ bụ onye n'agbanyeghị na ọ hụrụ n'anya na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya, dịkwa njikere ịtachi obi na ịrapara na nhọrọ ya ruo mgbe ha ruru oke afọ ojuju onwe onye.
Raphael Varane akụkọ nke na - Ihe okike:
Raphaël Varane n'oge egwuregwu n'etiti Real Madrid na Borussia Dortmund na Disemba 7, 2016 nwetara ụlọ ya site n'aka ndị agha Armed Robbers.
Dabere na akwụkwọ akụkọ El Mundo, ndị ohi ahụ batara n'ụlọ French na 9 n'ehihie, na oge egwuregwu nke egwuregwu ahụ, na-enweghị ịdọ aka ná ntị n'ihi na onye ọkpụkpọ echefuola ịgbanye usoro ahụ. mkpu.
Ọ bụ ezie na Varane na ndị òtù ọlụlụ ya jidere n'ụlọ (2-2) wee gụchaa nke abụọ n'òtù Njikọ Njikọ n'azụ ndị iro ha na mgbede, ndị ohi zuru ohi dị mma, ọla, ego na uwe.
Ihe ndị a nwere uru banyere euro 70,000, dị ka Ụwa. N'agbanyeghị na ndị uweojii Spen na-eme nnyocha dị ukwuu, a ka ga-ejide ndị ohi a.
Raphael Varane Mmụta:
Mgbe ole Zidine Zidane akpọ Varane banyere mmasị Real Madrid nwere na ịbanye ya na June 2011, Varane gwara Zidane ka ọ kpọghachi ya n'ihi na ọ nọ n'etiti nyochagharị maka ule nyocha baccalaureate ya.
N'okwu Varane…: 'Ọ dị egwu, enweghị m ike ikwere ya. Zizou jụrụ m ma m nwere mmasị, ekwuru m na m na-etinye uche na ule m ma na anyị kwesịrị ikwu okwu ọzọ mgbe ha gwụchara '.
Raphael Varane Eziokwu Akụkọ - Olee otú Jose Mourinho Si Nyere Ya Aka:
Raphael Varane ekpughewo otú Josị Mourinho si nyere ya aka ịpụ na ngwongwo n'oge mmalite nke oge ya na Bernabeu. Mourinho banyere Varane site na Ligue 1 n'akụkụ Lens azụ na 2011.
Mourinho ka na-abịakwute Varane mgbe a họpụtara ya onye njikwa Man United n'afọ gara aga ọ nweghị isi, na onye na-agbachitere mechara kọwaa na Zinedine Zidane kwenyesiri ike na ọ ga-anọ na Spain.
Ka o sina dị, Varane doro anya na ọ na-akwanyere ndị Portuguese ùgwù mgbe ọ nyechara ya aka n'oge mmalite nke oge ya na Madrid.
"M diri obere oge, ọ bụ oge Mourinho na-elekọta. Amaghị m na mmalite nke oge mere na anaghị m egwu egwu.
Adịghị m egwu nke ọma na ọzụzụ ma anaghị m egwu egwuregwu. Agwara m onye njikwa ahụ ma jụọ m: 'Gịnị bụ ihe ọjọọ, gịnị kpatara gị adịghị mma, gịnị kpatara na ị bụghị ọkwa gị?' ..."M wee sị: 'Amaghị m, Ana m agbalị, ma ihe anaghị arụ ọrụ ma enwekwaghị m okwukwe na onwe m.
Ekem, ke usen ita ke ukperedem, ke ini enye ekedide isua 19, enye ama enịm mi ke ntọn̄ọ mbemiso Manchester City. Ọ bụ egwuregwu dị mgbagwoju anya ma amaghị m ma ọ bụrụ na Jose Mourinho mara àgwà m, mana ejiri m ya dịka ihe ịma aka.
"Egwuregwu ahụ gara nke ọma, sitekwa na ya, ihe niile malitere ime nke ọma, agbanweela m ọtụtụ." Mourinho na-enwetakarị nkatọ maka ụzọ o si emeso ndị egwuregwu - ọkachasị ndị na - eto eto - ikpe Raphael Varane dị iche.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Raphael Varane's Childhood Akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Onye ọ bụla maara banyere ikike ya na-ewe iwe? Echere m na onye ọ bụla maara ya nzere ikike… ..